လူပျိုရည်ပျက်ချင်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှာတွေ့ခဲ့သော မင်္ဂလာဈေးနားက ညမွှေးပန်းလေးတစ်ပွင့်ရဲ့ ကြေကွဲဖွယ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် – MMPost
လူပျိုရည်ပျက်ချင်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှာတွေ့ခဲ့သော မင်္ဂလာဈေးနားက ညမွှေးပန်းလေးတစ်ပွင့်ရဲ့ ကြေကွဲဖွယ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်
ပညာပေး, ဖြစ်ရပ်မှန် March 12, 2018
ဗြုန်းဆို …ကောင်မလေး သဘတ်ကိုချွတ် ကောက်ဝတ်လိုက်တဲ့ … ရင်စည်းက … ကျွန်တော် မြင်နေကျ ..နိုင်ငံခြားကားတွေထဲကလို တောက်တောက်ပြောင်ပြောင် လှလှပပ အရာလေးမဟုတ်ပါဘူး …. အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ မိန်းခလေးတွေ ၀တ်တဲ့ ရင်ခံအကျီလို ဟာလေးပါ ဟောင်းနွမ်းစုတ်ပြတ်ပြီး အရောင်အဆင်းကင်းမဲ့နေတဲ့ ရင်ခံအကျီလေးကို ငေးကြည့်ရင်း ကောင်မလေး လက်တစ်စုံက .. အဲဒီအကျီလေးရဲ့ လက်မောင်းသားပေါ်က ကြိုးကလေးကို ကိုင်ပြီး တစ်စုံတစ်ခုကိုလုပ်လိုက်ပါတယ်
သူမရဲ့ အထာကျနေတဲ့ မျက်လုံးတွေက ဘယ်ညာ ရမ်းပြီး အကြည့်ဝေ့တစ်ချက်မှာ အရာအားလုံးကို သဘောပေါက်သွားတယ်ထင်ပါရဲ့ .. ဒီလိုလုပ်လေ ညီမကို ဖက်ထားလိုက်တဲ့ … အကို အဆင်ပြေအောင်ပါ တဲ့
အဲဒီမှာ ကလေးလေးတစ်ယောက် ဆုတံဆပ်လေးကိုင်လို့ …..ဘေးနားမှာက လောကဓံကြောင့် ပိန်လှီနေပေမယ့် မိန်းမချောတို့ ရုပ်ရည်ရှိတဲ့ အသက်သုံးဆယ်ကျော် အမျိုးသမီးတစ်ယောက် … သေချာပါတယ်… အဲဒါ သားအမိနှစ်ယောက်ပုံပါ ..သမီးလေးက ကျောင်းမှာ ဆုရ သမီးလေးနဲ့ အမေ ဆုလေးနဲ့ ဓါတ်ပုံတွဲရိုက် …. နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ မျက်နှာမှာ အပြုံးတွေနဲ့ … ဒီကလေးမလေးက ၀ိုင်းမှ ဟုတ်ပါလေစ ..ဘေးက သူ့အမေပေါ့ .. ၀ိုင်းက ငယ်ငယ်တုန်းက စာတော်တဲ့ ကလေးမလေးပဲ … ရင်ထဲမှာ ဆို့နင့်သွားတယ်
ဓါတ်ပုံလေးကြည့်ပြီး ငိုင်သွားတဲ့ ကျွန်တော်.. ”အဲဒါ ၀ိုင်းမေမေလေ…၀ိုင်း နှစ်တန်းတုန်းက ဆုရတုန်းက အမှတ်တရပုံလေးပါ.. ၀ိုင်းရဲ့ ပညာအရည်အချင်းကလဲ အဲဒီနှစ်က နောက်ဆုံးပါပဲ …. အဲဒီနောက်ပိုင်းကတော့ …ရုပ်ရှင်တွေထဲကလိုပေါ့ အကိုရယ်… အဖေကဆုံး ..အမေက နောက်ယောကျာ်းယူ …ပထွေးက နှိပ်စက် … သမီးပါကျောင်းထွက် ဈေးရောင်း ..နောက် စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်တွေကြောင့် အမေကဆုံး .. ပထွေးက ခြေတော်တင်….နောက်ဆုံးမှာ ဖာခေါင်းနဲ့ ရပြီး ဖာသည်မလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့” ပြီးတော့ ဟက်ဟက်ဟက်ဟက်နဲ့ ခြောက်ကပ်စွာ သူမ ရယ်မောနေခဲ့တယ်
ဒါ မြင်ဖူးနေကျ ရုပ်ရှင်တွေ ..ဖတ်ဖူးနေကျ ၀ထုတွေ .. ကြားဖူးနေကျ .. ညဉ့်နက်မလေးတွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျားက ပုံပြင်တွေ ဆိုပြီး … ကျွန်တော် တွေးထင်ပလိုက်ချင်တယ်.. ဒါပေမယ့် ..မျက်စိရှေ့မှာ မြင်နေရတဲ့ ..ကောင်မလေးရဲ့ မျက်ရည်မကျတဲ့ မျက်ဝန်းနဲ့ လောကကြီးကိုလှောင်ပြုံးတွေနဲ့ ခနဲ့တဲ့တဲ့ … မျက်နှာထားအောက်မှာ ကျွန်တော် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ..ဒါတွေက ပုံပြင်ပါလို့ ..တွေးထင်လို့ ရမှာတဲ့လဲ.. ကျွန်တော် ယုံတယ်လဲ မပြောပါဘူး …မယုံဘူးလဲ မပြောပါဘူး.. ဘာမှလဲ ပြောစရာမရှိပါဘူး … သူမကလဲ ဘာမှ ဆက်မပြောပါဘူး …ပုံမှန်အားဖြင့် ..ဒီအချိန်မှာ မျက်နှာကိုလွှဲ သက်ပြင်းကိုချ ..တစ်ရှိုက်ရှိုက်နဲ့ ငိုကြွေးနေရမယ့် မိန်းခလေးတစ်ယောက်က ဘာလို့များ…. ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို စိုက်စိုက်ကြည့်ပြီး တည်ငြိမ်နေရတာလဲ ….
ဘာမှ ပြန်မပြောဖြစ်ဘူး..ကျွန်တော် လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ …ကျောခိုင်း ထွက်သွားတဲ့ သူမကိုပဲ မြင်ရတော့တယ်
ခိုင်မာတည်ကြည်တဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ လောကဓံကို အရှုံးမပေးကျော်လွှားပြခဲ့တဲ့ညီမလေး တစ်ကယ်တော်ပါတယ်ငါ့ညီမ
မျက်လုံးနဲ့ပါးစပ်တွေကို ဆင်ကော်ဖြင့် ကပ်ပိတ်ပြီး လမ်းဘေးတွင် စွန့်ပစ်ခံရသည့် သနားစဖွယ်ခွေးလေး
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတွင် ခွေးကလေးတစ်ကောင် မျက်စိနှင့်ပါးစပ်ပေါက်တွေကို ဆင်ကော်ဖြင့်ကပ်ပိတ်ကာ လမ်းဘေးတစ်နေရာတွင် စွန့်ပစ်ထားတဲ့ လူမဆန်လုပ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်သွားပါတယ်။ Beauties and Beasts Inc, လို့ခေါ်တဲ့ တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနတစ်ခုမှ ရှစ်လအရွယ်သာရှိသေးတဲ့ Jack Russel/Parson အမည်ရှိ ခွေးလေးတစ်ကောင်၏ဓာတ်ပုံတွေကို Facebook ပေါ်တင်လိုက်ပြီး မျက်လုံးနဲ့ပါးစပ်ပေါက်တွေ ကော်ဖြင့်အပိတ်ခံရကာ လမ်းဘေးတစ်နေရာတွင် ဒဏ်ရာများနှင့် …